23rd June 2020, 04:12 pm | ९ असार २०७७
तपाईँले भनेजस्तै नेपालमा अहिले लक्षण रहित केसहरु एकदम धेरै देखिएका छन्। मान्छेहरुलाई स्वास्थ्य नै छु जस्तो भइराखेको छ। उनीहरुलाई खोकी पनि लागेको छैन केही पनि भएको छैन तर कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यस पछाडिको एउटा कारण-नेपालमा धेरैजसो केसहरु युवाहरुमा देखिएको छ। कम उमेरका मानिसहरुमा देखिरहेको छ। ति मानिसहरु कस्ता मानिस भन्दाखेरी प्रायजसो भारतमा काम गरीराखेका र भारतबाट फर्किएका व्यक्तिहरु हुन्। अहिले परीक्षण भइरहेको पनि उनीहरुमा बढी हो। यसले गर्दा यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन। किनभने कोरोनाको संक्रमण विशेष गरी युवाहरुमा एकदम कम लक्षण देखिने अथवा लक्षण नदेखिने हुन्छ।
नेपालको हकमा हामीले अलि वृद्धवृद्धाहरुमा धेरै केसहरु देखिसकेका छैनौं र भोलि त्यो केसहरु धेरै देखियो भने फरक कुरा हुन्छ। नत्र अहिले यसको लागि अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन।
तर, घरमा राख्दा जोखिम चाहिं के हुन्छ भने यदि उक्त व्यक्तिमा भाइरस रहेछ भने उसले परिवारको अन्य सदस्यहरुलाई सारेको नसारेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ परिवारका अन्य सदस्यहरु भन्दा दुरी अलिकति कायम गर्ने, छुट्टै कोठामा बस्ने, छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्नेलगायतका सुविधाहरु हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा संक्रमण भएको हुनसक्ने सम्भावित व्यक्तिलाई हामीले अन्य व्यक्तिहरुबाट छुट्टै राख्ने हो। तर क्वारेन्टाइन मै भएका पनि यदि कोही व्यक्तिमा संक्रमण देखियो भने उक्त व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा लगेर छुट्टै राख्नुपर्छ एकान्तबासमा लगेर राख्नुपर्छ। त्यसले हामीले क्वारेन्टाइन प्रयाप्त समयसम्म कायम राख्न सक्यौं भने भाइरस सर्ने जोखिमबाट हामी बाच्न सक्छौं त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्छौं। तर, यहाँ मुख्य प्रश्न भनेको हामीले क्वारेन्टाइन राम्रोसँग गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने हो। जस्तै सामाजिक दुरी कायम गर्ने हामी यहाँ अहिले यसरी कायम गरेको जस्तै त्यसैगरी हात सफा गर्ने, खोक्दा र हाँच्छ्यु गर्दा आफ्नो कुहिनोलो छोप्ने जस्ता कुराहरु हामीले गर्न सक्छौं यि कामहरु कायम राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुराहरु हो। तसर्थ यदि हामीले उपयुक्त तरिकाले क्वारेन्टाइन गर्न सक्यौं भने परीक्षण नगर्दा पनि हुन्छ।
कोभिड-१९ पान्डेमिकविरुद्ध लड्नका लागि डब्लुएचओले अनेक गाइडलाइनहरु तयार पारेको छ। यसरी तयार पारेको गाइडलाइनअनुसार कुनै देशले नीति बनाएर लागू गर्ने अवस्थामा पुग्दासम्म पुन: गाइडलाइन नै परिवर्तन हुन्छ। नेपालले पनि त्यस्तो अनुभुति गरेको छ। यस्तो किन भइरहेको छ।
एकदम सही प्रश्न हो यो। डब्लुएचओले प्राविधिक सहायता दिन्छ तर उसले दिने प्राविधिक सहायताहरु र जारी गर्ने मार्ग निर्देशनहरु ति सबै कुनै न कुनै प्रमाणमा आधारित हुन्छन विज्ञानमा आधारित हुन्छन्। अर्को कुरा कोभिड-१९ एकदम नयाँ रोग हो। यसको बारेमा पाँच महिना अगाडि सम्म हामीलाई केही थाहा थिएन। यो पाँच महिनामा यति धेरै अध्ययनहरु भइराखेका छन कि प्रत्येक दिन नयाँ कुराहरु पत्ता लागिराखेको छ। धेरै वैज्ञानिकहरुले पनि यो भाइरसको बारेमा अध्ययन गरिराखेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ति सबै कुराहरुको ट्रयाक गरिराखेको छ। वैज्ञानिकहरुले के नयाँ कुरा पत्ता लगाए भन्ने कुरा हेरिराखेको छ। हामीले देख्न सक्छौं बेला बेलामा त्यो नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ र विज्ञान आफै परिवर्तन भइराखेको देखिएको हुन्छ। पहिलो अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा अर्को अध्ययनले गलत ठहर्‍याएर अर्को नयाँ तथ्य दिन्छ। अरु सामान्य अवस्थामा पनि यो कुराहरु भइरहेको हुन्थ्यो तर हामीले याद गरिराखेका हुँदैनौं। तर, यो कोभिडको कुरामा के भयो भने एकै चोटि धेरै कुरा भइराखेको छ। धेरै व्यक्तिले यसमा रुचि देखाइराखेका छन र धेरै अध्ययनहरु भइराखेका छन र त्यसमा छिटो छिटो नयाँ कुराहरु पत्ता लागी राखेको हुनाले हामीलाई यस्तो लागेको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गर्ने गाइडलाइनहरु सबैभन्दा नयाँ वैज्ञानिक आधारहरुमा आधारित हुन्छ। म बुझ्छु यो कुरा अलिकति अलमल्याउने खाले हुनसक्छ तर हामीले जारी गर्ने कुराहरु हामीले दिने निर्देशनहरु सकेसम्म सबैभन्दा सत्यको नजिक हुन जरुरी छ त्यसैले यस्तो भएको हो।
कोभिड-१९ को माहामारीविरुद्ध नेपालले चालेका कदमहरुको बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। नेपालमै बसेर नियालिरहनुभएको छ। नेपालका सबल पक्षहरु के पाउनु भयो? र नेपालले सुधार गर्नुपर्ने के देख्नु भएको छ?
मैले नेपालमा काम गरेको पाँच वर्ष भयो त्यसैले गर्दा मैले नेपालको प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा केही हदसम्म जानकारी हासिल गरेको छु। नेपाल सरकारले लकडाउन कार्यान्वयन एकदमै छिटो गर्‍यो आंशिक रुपमा त्यो एउटा कारण हो जसले गर्दा अहिले सामुदायिक स्तरमा संक्रमण कम देखिएको छ। सरकारले गरेको अर्को राम्रो काम भनेको परीक्षण गर्ने क्षमतालाई निकै छिटो बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरी अहिले समुदाय स्तरमै त्यति धेरै संक्रमण फैलिराखेको छैन र अहिले परीक्षणको संख्या पनि प्रत्येक दिन बढिराखेको छ।
अर्को कुरा भनेको सरकारले यो लकडाउनको अवधिलाई चाहिं आफुलाई अझ राम्रोसँग तयार गर्नको लागि प्रयोग गरेको छ। धेरै काम भएको छ विशेषगरी हामीलाई चाहिने सामग्रीहरु खरिद गर्नमा ल्याउनमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु ल्याउने कुरामा कोभिड-१९ को लागि भनेर हस्पिटल तोक्ने कुरामा त्यसैगरी कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने कुरामा त्यसैगरी विभिन्न मार्ग निर्देशिकाहरु जारी गर्ने कुरामा चाहिं सरकारले राम्रो काम गरेको छ। यस अर्थमा भन्दाखेरी लकडाउनको समयलाई सरकारले राम्रोसँग सदुपयोग गरेको छ।
नेपाल एउटा निम्न आय भएको देश हो त्यसले गर्दाखेरी हामीले त्यहि परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सामान्य अवस्था मै पनि हामीले भनेजस्तो स्वास्थ्य सेवा दिनलाई अलिकति सीमितताहरु हुन्छन किनभने कतिपय अवस्थामा सामग्रीहरु हुँदैनन् कतिपय अवस्थामा मानव जनशक्तिहरु हुँदैनन्। यसले गर्दाखेरी हामीले निम्न आय भएको नेपाल जस्तो देशको प्रतिक्रिया र उच्च आय भएको देशको प्रतिक्रियासँग अलि दाज्न नमिल्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब आउने दिनहरुमा केसहरु एकदमै धेरै नै बढ्ने वाला छ। त्यसको लागि सरकारले तयारी राम्रै गरेको देखेको छु। विशेषगरी परीक्षणहरुको संख्या बढाउनको लागि आगामी महिनाहरुमा पनि सरकारले अझ धेरै तयारी गर्छ भन्ने लागेको छ।